Sunny Deol labadiisa wiil Karan iyo Rajvir ayaa Mumbai dib ugu soo celiyeen – Filimside.net
Sunny Deol labadiisa wiil Karan iyo Rajvir ayaa Mumbai dib ugu soo celiyeen
Superstar Sunny Deol waa 61-jir haddana weli Bollywood-ka ku dhex jiro sidoo kalena filimadana hogaamiye kowaad ka noqdo balse markaan waa inuu caruurtiisa masraxa u baneeyaa!
Sunny Deol ayaa bilaabay inuu caruurtiisa baraha bulshada soo dhigo asigoo rabbo taageerayaashiisa inay bartaan soona dhaweeyaan.
Sunny wuxuu aad ugu mashquulsan yahay soo caan bixinta wiilkiisa curudka ah Karan Deol asigoo u maal galinaayo Director-na ka ah filimka Pal Pal Dil Ke Paas oo haatan shaqadiisa inta badan duubis ahaan soo idlaatay.
Sunny Deol ayaa soo bandhigay sawir xiiso badan asigoo baabuur nooca jiibta loo yaqaan oo kor ka furan la saaran labadiisa wiil Karan Deol iyo Rajvir Deol wuxuuna ku kaftamay in wiilashiisa Mumbai kusoo celiyeen markii jadwalka filimka Pal Pal Dil Ke Paas soo idlaaday.
Sawirka sare wiilka baabuurka wado waa Rajvir Deol welina reer Deol ma aysan sheegin inuu Bollywood-ka kusoo biirayo mid kalena waa Karan Deol waaba midka hadda soo wado filimka Pal Pal Dil Ke Paas.
Sidaa darteed Sunny Deol labadiisa wiil waa diyaarsan yihiin waxaana loo badinaa in mustaqbalka magaca reer Deol iyaga sii wadi doonaan madaama Dharmendra Deol 80-sano sare usii dhaafay halka Sunny Deol isagana 61-jir yahay sidoo kalena adeerkood Bobby Deol isagana 50-sano sii gali rabo.
Waxaa Aqrisay 1,418